7 ỤLỌ * 10W Mini LED Moving Head Light - ỤLỌ & Onye nrụpụta
ỤLỌ ỤLỌ Ngwaahịa ỤLỌ 7 ỤLỌ * 10W Mini LED Moving Head Light
7 ỤLỌ * 10W Mini LED Moving Head Light
Electronic Dimming: 0% Igwe ọkụ isi 350w na-akpụ akpụ nwere mmetụta fotosensitivity siri ike yana mmetụta atomization mara mma 100%
Ngwaahịa: L28*W24*H27 cm
Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị, Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị, Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị, Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị, Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị, Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị, Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị, Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị, [object Window]. Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị.
Multi-Tiger Lighting nwere uru teknụzụ yana uru ika nke ikike ikike ọgụgụ isi nọọrọ onwe ya
1.Multi-Tiger Lighting nwere uru teknụzụ yana uru ika nke ikike ikike ọgụgụ isi nọọrọ onwe ya 24 Multi-Tiger Lighting nwere uru teknụzụ yana uru ika nke ikike ikike ọgụgụ isi nọọrọ onwe ya.
2.Multi-Tiger Lighting nwere uru teknụzụ yana uru ika nke ikike ikike ọgụgụ isi nọọrọ onwe ya, ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile.
3.ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile.
4.ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile.
5.ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile.
6.ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile, ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile.
7.ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile : ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile 1 ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile . ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile , ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile . ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile . ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile . ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile . ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-aza ajụjụ gị niile .
Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị: Are you a factory or trading company?
Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị: We are manufacturer with export qualification, provide competitive factory price.Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị : Where is your factory located ? How can I visit your factory ?
Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị : ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị ?
Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkụ ọkụ na-ebugharị : ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị , ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị , ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị , ma ị nwekwara ike ịrịọ anyị ka anyị zitere gị PI maka nkwenye gị. Anyị kwesịrị ịmara ozi ndị a maka iji gị , then you need to pay the freight to us .（Talk in detail）